AdVenture Communist 4.6.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.6.1 လြန္ခဲ့ေသာ 14 မိနစ္က
ဂိမ္းမ်ား သြင္တူျပဳျခင္း AdVenture Communist
AdVenture Communist ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Adventure အရင်းရှင်၏ဘုန်းခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် ပို. ပင်ပျင်းရိ clicker လာ! Adventure ကွန်မြူနစ်ပင်ခက်ခဲများနှင့်အာလူးသူဌေးကြီးဖြစ်လာ၏အိပ်မက်အလုပ်ဖြစ်တယ်ကြောင့်ဂိမ်းလိုသူကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေရဲဘော်အဘို့တည်နေသည် ..
ဘုန်းအသရေမှ Path ကိုဘုနျးကွီးသောအာလူးနှင့်အတူစတင်! ပိုပြီးအရင်းအမြစ်များရရှိနှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ကွန်မြူနစ်ပြည်နယ်၏ဘုန်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမှလယ်ယာနှင့်စုဆောင်းပါ။ သငျသညျခေတ္တခဏရပ်နားပေမယ့်အမြဲကရုဏာပြည်နယ်သို့ပြန်လာနိုင်အောင်သင်သည်သင်၏စွန့်ပစ်ခြင်းမှာအရင်းအမြစ်များနှင့်အတူ brimming, သင်တို့၏အမှုကိုစောင့်ဖို့အများကြီးရဲဘော်ကိုဆွဲဆောင်မည်!
ကွန်မြူနစ်ပြည်နယ်ကျိန်းဝပ်ဘယ်တော့မှ, သင်မူကား, ဘုန်းခေါင်းဆောင်ဤမယုံနိုင်စရာ features တွေနှင့်အတူလုပ်နိုင်သည်မှာ:
- သင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအလိုအလျောက်နဲ့သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ဖို့ဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်းသုတေသီများက။ သူတို့က "proletariat" ရှိ "လိုလားသူ" ထား!
- ပင်နေချိန်မှာသင်ပျင်းရိသို့မဟုတ်အိပ်ပျော်ခြင်းအာလူးစုဆောင်းပါ။ သငျသညျမှာချောင်းကိုလှုပ်နိုင်သည်ထက်ပိုမိုသောအာလူး; ကျနော်တို့အလွန်ကြီးမားတုတ်ရှိသည်!
- Gain ကိုသင်အပြည့်အမစ်ရှင်များအဖြစ်အများဆုံးနှင့်ကမ္ဘာ၏ကြွင်းသောအရာမှကွန်မြူနစ်စွန့်စားမှု၏ဘုန်းအသရေကိုဆောင် ခဲ့. ။ လူတစ်ဦးရဲ့ကျူးကျော်အခြားရဲ့စွန့်စားမှုဖြစ်ပါသည်, သတိရပါ!
ယနေ့ Adventures ကွန်မြူနစ် clicker Play! အစိုးရခွင့်ပြုထားသည့်ပျင်းရိပျော်စရာ၏သင့်နေ့စဉ်ရိက္ခာ!
AdVenture Communist အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
AdVenture Communist အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
AdVenture Communist အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
AdVenture Communist အား အခ်က္ျပပါ
leonleo098store စတိုး 124 248.01k
AdVenture Communist ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း AdVenture Communist အခ်က္အလက္
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.kongregate.com/pages/privacy
App Name: AdVenture Communist
Release date: 2019-08-21 17:40:08
AdVenture Communist APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ